လူငယ်တိုက်စစ်မှူး ပဲရော့အနေနဲ့ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးလို့ ထင်ကြောင်း မော်ရင်ဟိုပြော – Sports A2Z
UNICODE: တော့တငျဟမျဟော့စပါးဈနညျးပွ ဟိုဆေး မျောရငျဟိုက တိုကျစဈမှူးတှေ ဒဏျရာရရှိနခြေိနျမှာ လူငယျတိုကျစဈမှူး ထရှိုငျ ပဲရော့ကို သုံးပါလားဆိုတဲ့ အကွံပေးမှုတှအေပျေါ သူ့ကစားသမားအနနေဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျကို ကစားဖို့ အဆငျ့သငျ့မဖွဈသေးဘူးလို့ တုံ့ပွနျပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။
ဝုလျဗာဟမျ့ပျတနျ ဝမျးဒါးရားဈနဲ့ အိမျကှငျးပှဲစဉျမှာ သုံးဂိုး-နှဈဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမျ့နခြေိနျမှာ ဒီကစားသမားကို ထညျ့ပွီး တိုကျစဈကို အားမွှငျ့ခဲ့သငျ့ကွောငျး တခြို့က ဝဖေနျခဲ့ကွပွီး မျောရငျဟိုကတော့ သူ့ကို နာကငျြအခြိနျပိုမှာမှ ထညျ့ကစားခဲ့တာဖွဈသလို ထိရောကျတဲ့ ပုံစံကိုလညျး မပွသနိုငျသေးတာဖွဈပါတယျ။
ဒီပှဲမှာတော့ မျောရငျဟိုဟာ ကှငျးလယျက ဂိုးသှငျးကောငျးတဲ့သူတဈဦးဖွဈတဲ့ ဒယျလီ အယျလီကို တိုကျစဈမှူးနရောအထိ လိုကျပါကစားခိုငျးခဲ့ပွီး စာရှကျပျေါမှာ Attacking Midfielder လိုမြိုး နရောခထြားခဲ့ပမေယျ့ တကယျကစားရာမှာ ဂိုးရှအေ့ထိ တကျရောကျကစားခဲ့တာလညျးဖွဈသလို သူ့ရဲ့ အားထုတျမှုကနေ ဘာ့ဂျဗိနျးက ပထမဂိုးသှငျးယူခဲ့သလို ဒုတိယဂိုးအတှကျလညျး အျောရီယာရဲ့ ပွေးလမျးကွောငျးထဲ ထညျ့ပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ လူးကပျဈ မူရာရဲ့ အလုပျသိပျမဖွဈမှုကွောငျ့ စပါးဈတိုကျစဈ ရုနျးကနျခဲ့ရပွီး ဝုလျဗျက သုံးဂိုးပွနျသှငျးသှားခြိနျမှာတော့ မျောရငျဟိုအနနေဲ့ လူငယျကစားသမား ပဲရော့ကို လူစားလဲဖို့ မရှေးခယျြခဲ့ဘဲ ကှငျးလယျကစားသမားတှဖွေဈတဲ့ ဂကျြဒျဆနျ ဖာနနျဒကျဈနဲ့ အနျဒှမျဘီလီတို့ကိုသာ ထညျ့ခဲ့ပွီး ပဲရော့ကိုတော့ နာကငျြအခြိနျပိုမှာမှ လူစားလဲခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။
“ပဲရော့က အဆငျသငျ့မဖွဈသေးဘူးလို့ပဲ ဆိုရပါလိမျ့မယျ။ ဘာဖွဈလို့ အရနျခုံပျေါ ချေါလာသလဲဆိုတာကတော့ လာမယျလာ မပါဝငျနိုငျခဲ့လို့ပါ။ ပှဲပွီးခါနီးမှာတော ဒယျလီ အယျလီ နရောလှတျတှေ ရဖို့အတှကျ တဈဖကျနောကျခံလူ ကိုအာဒီကို ဖိအားပေးနိုငျမလားဆိုပွီး စမျးကွညျ့ခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ”လို့ မျောရငျဟိုက ဖွကွေားသှားခဲ့တယျလို့ သိရှိရပါတယျ။
ZAWGYI: တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါးစ်နည်းပြ ဟိုဆေး မော်ရင်ဟိုက တိုက်စစ်မှူးတွေ ဒဏ်ရာရရှိနေချိန်မှာ လူငယ်တိုက်စစ်မှူး ထရွိုင် ပဲရော့ကို သုံးပါလားဆိုတဲ့ အကြံပေးမှုတွေအပေါ် သူ့ကစားသမားအနေနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ကို ကစားဖို့ အဆင့်သင့်မဖြစ်သေးဘူးလို့ တုံ့ပြန်ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
ဝုလ်ဗာဟမ့်ပ်တန် ဝမ်းဒါးရားစ်နဲ့ အိမ်ကွင်းပွဲစဉ်မှာ သုံးဂိုး-နှစ်ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်နေချိန်မှာ ဒီကစားသမားကို ထည့်ပြီး တိုက်စစ်ကို အားမြှင့်ခဲ့သင့်ကြောင်း တချို့က ဝေဖန်ခဲ့ကြပြီး မော်ရင်ဟိုကတော့ သူ့ကို နာကျင်အချိန်ပိုမှာမှ ထည့်ကစားခဲ့တာဖြစ်သလို ထိရောက်တဲ့ ပုံစံကိုလည်း မပြသနိုင်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပွဲမှာတော့ မော်ရင်ဟိုဟာ ကွင်းလယ်က ဂိုးသွင်းကောင်းတဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒယ်လီ အယ်လီကို တိုက်စစ်မှူးနေရာအထိ လိုက်ပါကစားခိုင်းခဲ့ပြီး စာရွက်ပေါ်မှာ Attacking Midfielder လိုမျိုး နေရာချထားခဲ့ပေမယ့် တကယ်ကစားရာမှာ ဂိုးရှေ့အထိ တက်ရောက်ကစားခဲ့တာလည်းဖြစ်သလို သူ့ရဲ့ အားထုတ်မှုကနေ ဘာ့ဂ်ဗိန်းက ပထမဂိုးသွင်းယူခဲ့သလို ဒုတိယဂိုးအတွက်လည်း အော်ရီယာရဲ့ ပြေးလမ်းကြောင်းထဲ ထည့်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လူးကပ်စ် မူရာရဲ့ အလုပ်သိပ်မဖြစ်မှုကြောင့် စပါးစ်တိုက်စစ် ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီး ဝုလ်ဗ်က သုံးဂိုးပြန်သွင်းသွားချိန်မှာတော့ မော်ရင်ဟိုအနေနဲ့ လူငယ်ကစားသမား ပဲရော့ကို လူစားလဲဖို့ မရွေးချယ်ခဲ့ဘဲ ကွင်းလယ်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ ဂျက်ဒ်ဆန် ဖာနန်ဒက်စ်နဲ့ အန်ဒွမ်ဘီလီတို့ကိုသာ ထည့်ခဲ့ပြီး ပဲရော့ကိုတော့ နာကျင်အချိန်ပိုမှာမှ လူစားလဲခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
“ပဲရော့က အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးလို့ပဲ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့ အရန်ခုံပေါ် ခေါ်လာသလဲဆိုတာကတော့ လာမယ်လာ မပါဝင်နိုင်ခဲ့လို့ပါ။ ပွဲပြီးခါနီးမှာတော ဒယ်လီ အယ်လီ နေရာလွတ်တွေ ရဖို့အတွက် တစ်ဖက်နောက်ခံလူ ကိုအာဒီကို ဖိအားပေးနိုင်မလားဆိုပြီး စမ်းကြည့်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်”လို့ မော်ရင်ဟိုက ဖြေကြားသွားခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
Article • La Liga • Other Leagues • Premier League
၂၁ ရာစုရဲ့စိတျလှုပျရှားစရာအကောငျးဆုံးအသငျး ၅ သငျး
Match Report • Other • Other Leagues
ဒိုငျလူကွီးကို သတိလဈသှားအောငျ ဆောငျ့ကနျခဲ့လို့...
Analysis • Bundesliga • La Liga • Ligue1 • Other Leagues • Premier League • Serie A
တိုငျတိုငျပငျပငျနဲ့ အသငျးကွီးတှေ ရှုံးခဲ့တဲ့ ဥရောပရဲ့...
Analysis • Article • Bundesliga • La Liga • Other Leagues • Premier League • Serie A • UCL&UEL
Group of Death က လီဗာပူးလျနဲ့...
International • La Liga • Other Leagues • Premier League
ဖရီးကဈကို ဘယျရော​ညာပါ ကနျနိုငျတဲ့ ကာဇိုလာက...
Article • Bundesliga • Ligue1 • Other Leagues • Premier League • Serie A
အေးဂငျြ့ ရိုငျယိုလာ ကိုငျထားတဲ့ အကောငျးဆုံး ဖောကျသညျ...